शाकाहारी हुँदैमा पूर्ण स्वस्थ्य भइन्छ त? पूर्ण शाकाहारी हुनु पनि हुनसक्छ घातक ! – Khabar Patrika Np
शाकाहारी हुँदैमा पूर्ण स्वस्थ्य भइन्छ त? पूर्ण शाकाहारी हुनु पनि हुनसक्छ घातक !
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत्र ११, २०७७ समय: २२:०४:२९
माछा खाँदा जिउ भारी नहुने हुँदा दिउँसोभर शरीर चंगा हुन्छ र काममा मन धेरै जान्छ ।